Iphone cusub 11 iyo Iphone 11 Pro | Abuurista khadka tooska ah
Dadka jecel tikniyoolajiyadda iyo taageerayaasha shirkadda weyn ee Apple ayaa nasiib ku leh mana ahan wax lala yaabo, in yar oo sugitaan ah kadib. Apple ayaa soo saartay qalab cusub oo mobilo ah, iPhone 11 iyo iPhone 11 Pro.
In badan ayaa la isla dhexmarayay sida qaabkani cusub u noqon doono, qaar baan aragnay xasuusno baraha bulshada ee ku saabsan sida naqshada qalabkan cusub u noqon karto, laakiin hadda durba waa dhab waanan ognahay sida ay tahayWixii intaas ka sii badan, waanu keydin karnaa.
Sida laga soo xigtay shirkadda lafteeda hal ku dhiggeeda iPhone 11 "Qiyaasta saxda ah ee wax walba". Qaabkan waxaa loogu talagalay laba kamaradood si loogu daboolo aragti ballaadhan oo ballaaran, sidoo kale leh a xagal ballaadhan oo ballaadhan oo kuu oggolaanaysa inaad aragto wax kasta oo ka baxsan dhismahaaga xitaa waad sawiri kartaa. A batteriga ugu fiican taasi xitaa waxay socotaa maalintii oo dhan iyo jab ugu dhaqsaha badan yaa laga yaabaa inuu haystay taleefan casri ah. Waxaas oo dhan waa inaan ku darnaa fiidiyaha tayada leh ee May.
Waxaan ka heli karnaa moodelkan mid, ma aha laba, ama saddex midab, laakiin lix midab, midab, jaalle, cagaar, madow, caddaan iyo casaan.
Dhinaca kale, iyo sidii caadiga ahaydba, waxay na siinayaan nooc ka mid ah noocyada la hagaajiyay, xaaladdan "Pro-kii ugu horreeyay", sida halku dhigoodu leeyahay. Xaaladdan oo kale ayay na soo bandhigayaan taleefan casri ah oo wata sedex kamaradood. Sida ay ku yiraahdaan boggooda: “Layaabka cajiibka ah ee laba jibaaraya sharadka barashada mashiinka isla markaana dib u qeexaya waxa suuragal u ah mobilka Waxaa jiray iPhone kale, laakiin kan kaliya ayaa kasbaday xaqa loogu yeero Pro ”.
Waxaan sidoo kale ka heli karnaa iyaga oo leh laba cabbir iyo afar dhammaad ah, cirro bannaan, lacag, cagaar habeen iyo dahab ah.
Haatan ma awoodi doono inaan ku raaxeysto aaladdan, iPhone 8plus-kayga wax weyn ayuu qabanayaa, laakiin sida ugu dhakhsaha badan ee aad u hesho, ii sheeg waxa aad u malaynayso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Iphone cusub 11 iyo Iphone 11 Pro
Muxuu gadaal qasan yahay, 3daas wareeg ee madow.
Sikastaba ... dhammaadka xilli. Waxaan horey u ogaanay cida markabka ka booday sanadkan.